Naxariis iyo Nabadgelyo Korkiisa Ha Ahaato - Wikipedia
Hadal kooban oo aay muslimiinta dhahaan markii lagu ag sheego nabi muxamed ama anbiyada kale
Calayhi salaatu wa salaam.
Naxariis iyo Nabadgelyo Korkiisa Ha Ahaato Salalaahu Calayhi Wa Salam (ingiriis: Peace Be Upon Him; carabi: ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ; sidoo kale: ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ, "ṣall Allāhu ʿalay-hi wa-sallam", loo soo gaabiyo: S.A.W.) waa kalmado ay asxaabta Nebi Muxamed samaysay si ay ugu sharfaan asaga. Naxariis iyo Nabadgelyo Korkiisa Ha Ahaato, , waxaa la sameeyay geeridii nabiga ka dib, taasi ooy asxaabtu isla garteen ineey qadarin iyo sharafta ay u hayaan nabiga ku muujiyaan. Wakhtigaasi asxaabtu waxay soo ururiyeen “noloshii nebiga” (siirada) iyo hab "dhaqankii nebiga" (sunnada) kuwaasi oo ah aasaaska iyo saldhiga shareecada lagu maamulo Dawladda Islaamka. Sidoo kale, asxaabtu waxay isla-garteen in marka la soo hadal-qaado magaca nebiga la dhaho Naxariis iyo Nabadgelyo Korkiisa Ha Ahaato (ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ, "ʿalayhi as salām").
1 Taariikhda Nebiga Oo Kooban
Taariikhda Nebiga Oo KoobanEdit
Dhalashaddii & Barbaarintii rasuulkaEdit
Sida saxda ah sunaha diinta Islaamka waxaa ka mid ah in marka la soo hadal-qaado nebi ama rasuul la yidhaahdo "Naxariisi korkiisa ha ahaato", marka laga reebo Nebi Muxamed
oo la odhanayo "Naxariis iyo Nabadgelyo korkiisa ha ahaato". Midani waa sharfid, qadarin iyo maamuus ay dadka muslimiinta ahi u hayaan nebiyada iyo rusuusha Alle.
↑ "ingiriis: Peace Be Upon Him; carabi: ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ; sidoo kale: ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ, "ṣall Allāhu ʿalay-hi wa-sallam", loo soo gaabiyo: S.A.W."
↑ "asxaabta Nebi Muxamed
↑ "“noloshii nebiga” (siirada) iyo hab "dhaqankii nebiga" (sunnada)"
↑ "Naxariis iyo Nabadgelyo Korkiisa Ha Ahaato (ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ, "ʿalayhi as salām")"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Naxariis_iyo_Nabadgelyo_Korkiisa_Ha_Ahaato&oldid=210043"
Last edited on 3 Maarso 2021, at 01:44
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Maarso 2021, marka ee eheed 01:44.